Boriborintany faha-3: nahazo “kit scolaire” ireo mpianatra | NewsMada
Amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao, nanao tantsoroka fanomezana fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy sahirana miisa 100, avy eny amin’ny fianarana miankina sy tsy miankina eny amin’ny ambaratonga voalohany, izay mipetraka eny amin’ny faritra iva, ny avy ao amin’ny boriborintany fahatelo, kaominina Antananarivo Renivohitra, sy ny mpiara- miombon’antoka aminy, ny Iarivo Lion’s Club.
Tafiditra amin’ny vina sosialin’ny kaominina ny fitsinjovana ny ankizy sahirana sy ny hahafahan’ny ankizy miatrika tsara ny taom-pianarany. Marihina fa nahazo tombony tamin’izany ny fokontany miisa dimy: Andranomahery, Tsaramasay, Ankorondrano Andrefana, Ankazomanga- Andraharo ary Ankorondrano Atsinanana. Ankizy dimy taona hatramin’ny 12 taona ny voakasika tamin’izany.
Nisy ny fanadihadihana nataon’ny CUA teny anivon’ny Cisco sy ny Gap mikasika ireo ankizy nizarana fitaovam-pianarana ireo. Betsaka ireo ankizy misedra olana amin’ny fidirana mianatra ary tsy mbola manana fitaovana akory vokatry ny fahasahiranan’ny ray aman-dreniny. Ny delegen’ny boriborintany fahatelo, Razafitsalama Hery, sy ny fikambanana Iarivo Lion’s Club no nitarika ny hetsika teny an-toerana.